जब मिडिया नै नागरिकविरुद्ध हुन्छ, नागरिकले मिडिया बन्नुपर्छ
रवीश कुमार काठमाडाैं, २१ भदाै
झण्डै एक महिना अघि भारतीय वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमारलाई वर्ष २०१९ को प्रतिष्ठित रेमोन म्यागसेसे पुरस्कार दिने घोषणा भएको थियो । आगामी सोमबार ९ सेप्टेम्बरमा रवीशलाई ४० हजार डलरको एशियाको नोबेल पुरस्कारपनि भनिने म्यागसेसे पुरस्कारबाट सम्मान गरिने छ । यसअघि शुक्रबार मनिलामा म्यागसेसे पुरस्कार पाउनु अघि पहिलो सार्वजनिक सम्बोधन गरे । सम्बोधनमा उनले भारतीय मिडियामा रहेको विसंगतिबारे आफ्नाे विचार राखे । सम्बोधननमा उनले नागरिक बनिरहने नागरिक पत्रकारिताको भूमिकाबारे आफ्नाे विचार राखे । हरेक महोल विपक्षमा भएको अवस्थामा स्वतन्त्र पत्रकारिताका लागि चाहिने साहसबारे पनि रवीशले खुलेर आफ्नाे विचार राखे । रवीशको यो विचार नेपाली पत्रकारिताका लागि पनि निकै सान्दर्भिक भएकोले रवीशको मनिलाको सम्बोधन यहाँ जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिएको छ ।
नमस्कार, म रवीश कुमार । म यति बेला भारतबाट निकै टाढा छु, अनि त्यो चन्द्रबाट पनि जहाँ भारत पुग्दैछ । अहिले म जुन चन्द्रको कुरा गर्दैछु, त्यहाँ खाल्डाहरु धेरै छन्, अनि त्यो कसैको मुठ्ठीमा बन्द भएको छ । संसारभरीनै सूर्यको रापमा तातिएको लोकतन्त्रलाई चन्द्रको शीतल त चाहिन्छ नै । तर यो शीतल आउँछ कहाँबाट...? सुचनाहरुको वास्तविकताबाट, प्रमाणिकताबाट, पवित्रताबाट, अनि साहसबाट, नेताहरुको चर्को स्वरबाट पक्कै होइन । सूचना जति पवित्र हुन्छ, प्रमाणिक हुन्छ, नागरिककाबीच भरोसा त्यतिनै गहिरो हुन्छ । देश सही सूचनाले बन्छ । फेक न्युज, प्रोपोगाण्डा अनि झुठो इतिहासले जहिले पनि भीड मात्र बन्छ । मलाई हिन्दीमा बोल्ने मौका दिएकोमा रोमन मैगसेसे फाउन्डेशनलाई धेरै धेरै धन्यवाद, नत्र मेरी आमा र भाउजुले म के बोलिरेहको छु बुझ्दैन थिए ।
दुई महिना पहिले जब म 'Prime Time' को तयारीमा जुटेको थिएँ, त्यहि बेला मेरो सेलफोनको घण्टी बज्यो । कलर आईडीमा फिलिपिन्स लेखेको थियो । मलाई लाग्यो, कुनै ‘ब्लफ कल’ आएको होला । यहाँको नम्बरबाट धेरै ‘ब्लफ कल’ आउँछ । यदि उनीहरु साँच्चै यहाँ बस्छन् भने उनीहरुलाई यस हलमा स्वागत छ, म आइसकेँ ।
फिलिपिन्सको नम्बर उठाउँदै मैले मेरा सहयोगीलाई आउ म तिमिलाई ‘ब्लफ कल’को भाषा सुनाउँछु भन्दै फोनको स्पीकर अन गरे, तर एकदम राम्रो अंग्रेजीमा एकजना महिलाको आवाज आयो । ‘मे आई प्लीज स्पीक टु मिस्टर रवीश कुमार...?’ हजारौं ‘ब्लफ कल’मा आजसम्म कहिल्यै महिलाको आवाज आएको थिएन । मैले तुरुन्तै फोनलाई स्पीकर मोडबाट हटाएँ । त्यस्तै आवाज उताबाट आइरहेको थियो अनि त्यो आवाजले मलाई सोध्दै थियो, ‘यसवर्षको रेमाेन म्यागसेसे पुरस्कार तपाईंलाई दिने निर्णय भएको छ, के तपाईंलाई स्वीकार छ ...?’ मैले स्वीकार गरेँ, त्यसैले म यहाँ छु । यहाँ अहिले ममात्र आएको छैन, मेरो साथमा पुरै हिन्दी पत्रकारिता आएको छ, जसको हालत आजभोली निकै लाजमर्दो छ । गणेश शंकर विद्यार्थी अनि पीर मूनिस मोहम्मदका साहसवाला पत्रकारिता अहिले डराएको छ, लठेब्रो भएको छ । अब म आफ्नाे विषयमा आउँछु ।
यो नागरिक हुनुको परीक्षाको समय हो । नागरिक हुनुलाई फेरि बुभ्नुपर्ने छ र त्यसका लागि लड्नुपर्ने छ । यति जान्दाजान्दै पनि कि यतिबेला नागरिक हुनुमा चौतर्फी हमला भइरहेको छ अनि सत्ताको निगरानी बढिरहेको छ, एक व्यक्ति वा एक समूहको रुपमा जसले यो हमलाबाट आफूलाई बचाउन सक्छ अनि यसमा खारिन्छ, त्यही नागरिकले भविष्यको सुदृढ समाज र सरकारको आधारशिला राख्नेछ । संसार यस्ता जिद्दी नागरिकहरुले भरिएको छ । घृणाको माहोल र सूचनाको खडेरीमा कोही छ, जो मरूभूमिमा सिउँडीको फूलजस्तै फक्रिएको छ । बालुवामा उभिएको रुखले कहिल्यै आफू हुनुको अर्थ खोज्दैन, ऊ अरुका लागि उभिएको हुन्छ, जसबाट बालुवामा पनि हरियाली हुन्छ भन्ने थाहा होस् । जताजता लोकतन्त्र हरियो मैदानबाट मरूभूमिमा परिवर्तित गरिँदैछ, त्यहाँ नागरिक हुन र सूचनामा उसको अधिकारको लडाइँ पक्कै पनि असजिलो भएको छ । तर, असम्भव भएको छैन ।
नागरिक हुनको लागि सूचनाको स्वतन्त्रता र प्रमाणिकता जरुरी हुन्छ । अहिले मिडिया र त्यसको व्यापारमा राज्यको पूरै नियन्त्रण छ । मिडियामा नियन्त्रणको मतलब हो, हाम्रो नागरिक हुनुको परिधि कम हुँदै जानु । मिडिया अहिले राज्यले निगरानी गर्ने अंग बनेको छ । अब यो चौथो अंग रहेन, पहिलो अंग भएको छ । निजी मिडिया र सरकारी मिडियाको अन्तर मेटिएको छ ।
विचारहरुको विविधता प्रस्तुत गर्ने यसको काम रहेन, बरु नियन्त्रण गर्नु चाहिँ भयो । यस्तो भारतलगायत संसारका अरु धेरै देशमा भइरहेको छ ।
न्युज च्यालनहरुको बहसको भाषाले लगातार जनतालाई राष्ट्रवादको दायराबाट बाहिर निकाली रहन्छ । इतिहास र सामूहिक स्मृतिहरुलाई विस्थापित गरेर एउटा पार्टीको राष्ट्र र इतिहास जनतामा थोपरिँदै छ । मिडियाको भाषामा दुई प्रकारका नागरिक छन् – एउटा नेसनल र अर्को एन्टी नेसनल । एन्टी नेसनल ती हुन्, जो प्रश्न गर्छन्, विमति राख्छन् । विमति लोकतन्त्र र नागरिक हुनुको आत्मा हो । त्यो आत्मामा प्रत्येक दिन आक्रमण भइरहेको छ । जब नागरिक हुनु नै खतरामा छ अथवा त्यसको अर्थ नै बेग्लै बनाइन्छ, त्यसबेला त्यो नागरिकको पत्रकारिता कस्तो होला ? नागरिक त दुवै हुन् । जो आफूलाई नेसनल भन्छन्, जसलाई एन्टी नेसनल भनिन्छ ।
संसारका धेरै देशमा यस्तै राज्य प्रणाली भईसक्यो, जसमा न्यायालय पनि सामेल छ, अनि जनताको बीचमा विधिसम्मत भइसकेको छ । तैपनि हामी कश्मीर र हङकङको उदाहरणबाट बुझ्न सक्छौं की जनताहरुबीच लोकतन्त्र र नागरिक हुनको क्लासिक बुझाइ अझै पनि जिवित छ अनि उनीहरु त्यसका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् । आखिर किन हङकङमा लोकतन्त्रका लागि लड्दै गरेका लाखौं जनताले सोशियल मिडियामा विश्वास गर्न छाडे ? उनीहरुलाई त्यो भाषामा पनि विश्वास रहेन, जसलाई सरकारहरुले बुझ्छन् । त्यसैले उनीहरुले आफ्नै भाषा बनाए अनि त्यसैबाट आन्दोलनको रणनीतिको सन्देश फैलाए ।
यो नागरिक हुनुको रचनात्मक लडाइँ हो । हङकङका नागरिक आफ्नाे अधिकार बचाउन ती ठाउँहरुको समानान्तर नयाँ ठाउँ बनाइरहेका छन्, जहाँ लाखौं जनता नयाँ तरिकाले कुराकानी गर्छन्, नयाँ तरिकाले लड्छन् अनि एकै छिन्मा जम्मा हुन्छन् । आफ्नै एप बनाए अनि मेट्रोको इलेक्ट्रोनिक टिकट खरिद गर्ने रणनीति नै परिवर्तन गरे । फोनको सिमकार्डको प्रयोग फरक ढंगले गरे । नियन्त्रणका यी समाग्रीलाई नागरिकहरुले रद्दीमा बदली दिए । यही प्रकृयाहरुले बताउँछ राज्यले नागरिक हुनुको युद्ध अझै जितिसकेको छैन । हङकङका मानिस सूचनाको संसारको आधिकारिक नेटर्वकबाट आफैं अलग भए ।
कश्मीरमा छुट्टै कथा छ । त्यहाँ कैयौं दिनसम्म सूचना संयन्त्र बन्द गरियो । एक करोड भन्दाबढी जनसंख्यालाई सरकारले सूचनाको संसारबाट अलग गरिदियो । इन्टरनेट शटडाउन भयो । मोबाइल बन्द भए । सरकारका अधिकारीहरु प्रेसको काम गर्न थाले अनि प्रेसका मानिस सरकारको काम गर्न थाले । के तपाईं सूचना र सञ्चार बिनाको नागरिकको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ...? के होला, जब मिडिया जसको काम नै सूचना जुटाउने हो, सूचनाका सम्पूर्ण नेटवर्क बन्द गर्नुलाई समर्थन गर्छ, अनि उ त्यस्ता नागरिकको विरोधी हुन्छ जो आफ्नाे तरिकाले सूचना ल्याइरहेको हुन्छ वा सूचनाको माग गरिरहेको हुन्छ ।
यो पनि त्यति नै दुर्भाग्यपूर्ण छ की भारतका सबै छिमेकी देश प्रेस स्वतन्त्रका सन्दर्भमा निकै तल्लो स्तरमा छन् । पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका, बंगलादेश, म्यानमार अनि भारत । तल्लो वरियतामा पनि यिनै छिमेकी छन् । पाकिस्तानमा एउटा इलेक्ट्रोनिक मिडिया रेगुलेटरी अथोरिटी छ, जसले आफ्ना न्युज च्यानललाई कश्मीरका बारेमा कसरी प्रोपोगाण्डा गर्ने भन्ने निर्देशन दिन्छ । कसरी रिपोर्टिङ गर्ने बताउँछ । हुन त यसलाई सरकारी भाषामा सुझाव भनिन्छ, तर यो निर्देशन नै हुन्छ । १५ अगस्तमा स्क्रिन खाली गर्न भनिन्छ, ताकी कश्मीरको समर्थनमा कालो दिन मनाउन सकियोस् । जसको समस्याको एउटा ठूलो कारण पाकिस्तान पनि हो ।
अर्कातिर, जब ‘कश्मीर टाइम्स’ की अनुराधा भसीन भारतको सर्वोच्च अदालत जान्छिन्, उनको विरोधमा भारतको प्रेस काउन्सिल पनि अदालत जान्छ । कश्मीरमा मिडियामा लागेको प्रतिबन्धलाई आप्mनो समर्थन छ भनी जानकारी दिन । मेरो विचारमा भारतको प्रेस काउन्सिल र पाकिस्तान मिडिया रेगुलेटरी अथिरिटिको कार्यालय एउटै भवनमा राखिनु पर्छ । धन्य एडिटर्स गिल्ड अफ इन्डियाले कश्मीरमा मिडियामाथि लागेको रोक र भारतको प्रेस काउन्सिलको आलोचना गर्यो । प्रेस काउन्सिल पछि स्वतन्त्रताको पक्षमा आयो । दुवै देशमा नागरिकले सोच्नुपर्ने भएको छ, लोकतन्त्र एउटा गम्भीर व्यापार हो ।
प्रोपागाण्डाबाट उनीहरु एक अर्कामा विश्वास जगाउन सक्लान् त....? एताबाट लोला फ्याक्ने अनि उताबाट पनि लोला फ्याक्ने होली त होइन । बरु, भारतका च्यालनहरु परमाणु हमला हुँदा कसरी बन्ने भनेर तयारी गर्ने लेक्चर दिइरहेका छन् । परमाणु हमलामा भूमिगत तलामा लुक्न सिकाइरहेका छन् । तपाईं नहाँस्नु । उनीहरु निकै गम्भीर भएर यो काम गरिरहेका छन् ।
अब यसै सन्दर्भमा आजको विषयको टपिकलाई फ्रेम गर्नुहोस् । यो त्यही मिडिया हो जसले आफ्नाे खर्च कटौती गर्न नागरिक पत्रकारिताको चलन शुरु गराए । यसैबाट मिडियाले आफ्नाे रिस्क आउटसोर्स गर्यो । मेनस्ट्रिम मिडियाभित्रको नागरिक पत्रकारिता र मेन स्ट्रिम मिडियाबाहिरको नागरिक पत्रकारिता फरक–फरक हुन् । जब सामाजिक सञ्जाल सुरुवातका बेला आम मानिसले प्रश्न गर्न थाले त्यतिबेला यिनै मिडिया समाजिक सञ्जालको विरोधी भए । न्युज रुमभित्र ब्लग र वेबसाइट बन्द गरिए । आज पनि कतिपय न्युज रुममा पत्रकारहरुलाई व्यक्तिगत धारणा लेख्ने अनुमति छैन ।
यो छुट्टै कुरा हो की त्यसै समय बगदाद बर्निङ्गमार्फत २४ वर्षकी छात्रा रिभरब्यान (वास्तविक नाम सार्वजनिक गरिएन) को इराकमा भएको हमला, युद्धले भएको तवाही ब्लग पोस्टको रुपमा आईरहेको थियो अनि जसलाई सन् २००५ मा ‘Baghdad Burning: Girl Blog form Iraq ’ नाममा पुस्तकको रुपमा प्रकाशित गरियो, अनि प्रमुख मिडियाले पनि माने जुन काम सामाजिक सञ्जालमार्फत किशोरीले गरिन्, त्यो आफ्ना पत्रकारले पनि गर्न सकेनन् । यो नागरिक पत्रकारिता हो, जुन मेनस्ट्रिम मिडियाभन्दा बाहिर छ ।
अहिले कुनै किशोरीले कश्मीरबाट ‘बगदाद बर्निङ्ग’ जस्तो ब्लग लेखिन् भने, मेनस्ट्रिम मिडियाले उसलाई एन्टी नेसनल भन्ने छ । मिडिया लगातार नागरिक पत्रकारिताको स्थानलाई एन्टी नेसनलको नाममा अवैधानिक बनाउँदैछ, किनकि, उसको रहर अब पत्रकारिता रहेन । पत्रकारिताको नाममा मिडिया अब राज्यको मुख्य चाकर हो, एजेन्ट हो । मेरो विचारमा नागरिक पत्रकारिता कल्पनाको विजारोपण यस्तै बेलाको लागि भएको हो, जब मिडियाको मेनस्ट्रिम पत्रकारिता सूचनाको विपक्षमा हुन्छ । उसलाई प्रत्येक त्यो नागरिक देश विरोधी देख्छ, जो सूचना पाउनको लागि संघर्ष गरिरहेको हुन्छ । जब मेनस्ट्रिम मिडिया नागरिकलाई सूचनाबाट बञ्चित गर्न खोज्छ । असहमतिको आवाजलाई गद्दार भन्न थाल्छ । त्यसैले यो परीक्षाको समय हो ।
जब मिडिया नै नागरिकविरुद्ध हुन्छ, नागरिकले मिडिया बन्नु पर्छ । यति थाहा हुँदाहुँदै की राज्य नियन्त्रणको यो समयमा नागरिक र नागरिक पत्रकारिता दुवैलाई धेरै ठूलो खतारा छ अनि टाढा टाढासम्म सफताको संकेत छैन । उसलाई राज्यले सूचना प्राप्तिको सबै ढोका पुरै बन्द गरिदिएको छ । मेनस्ट्रिम मिडिया नागरिक पत्रकारितालाई खर्च घटाउने र व्यापारको मुख्य श्रोत बनाउन चाहन्छ त्यसैले उसले सरकारको मुखपत्र हुनु जरुरी छ । नागरिक पत्रकारिता जनताको सहयोगमा सरकार र विज्ञापनको जालोबाट अलग रहन संघर्ष गरिरहेको छ ।
भारतको मिडिया पढे–लेखेका नागरिकलाई दिन–रात अबुझ बनाउन लागिरहेको छ । उसले अन्धविश्वासबाट घेरिएका नागरिकलाई सचेत र समर्थ बनाउने प्रयास छोडिसकेको छ । अन्धराष्ट्रवाद र साम्प्रदायिकता उसको सिलेबसको अंग बनेको छ ।
उसले राज्यको कथनलाई नै पवित्र सूचना मान्न थालेको छ । यदि तपाईं यही मिडियाको माध्यमबाट लोकतन्त्रलाई बुझ्ने प्रयास गर्नहुन्छ भने यसले लोकतन्त्रको यस्तो तस्वीर बनाउँछ, जहाँ सबै सूचनाको रंग एउटै हुन्छ । अनि त्यो रंग सत्ताको रंगसँग मेल खान्छ । सयौं च्यानल छन्, तर सबै च्यानलमा एकै प्रकारका सूचना छन् । एकै प्रकारका बनावटी प्रश्न गरिन्छ ताकि, सूचनाको नाममा धारण फैलाउन सकियोस् । इन्फरमेसनमा धारणा नै सूचना हो । (perception is new information) जसमा हरके दिन नागरिकलाई तर्साइन्छ, उनीहरुका बीच असुरक्षा फैलाइन्छ कि बोल्यो भने तपाईंको अधिकार खोसिन्छ । यस्ता मिडियाका लागि विपक्ष भनेको नै अभद्र शब्द हो ।
जब मेनस्ट्रिम मिडियामा विपक्ष र असहमति गाली बन्छ, तब संकट नागरिकमाथि नै आउँछ । दुर्भाग्य यस्तो काममा न्युज च्यानलका आवाज सबैभन्दा कर्कश र चर्का छन् । एंकर अब बोल्दैनन्, चिच्याउँछन् ।
भारतमा धेरै कुरा सानदार छन्, यो महान देश हो, उसका कतिपय उपलब्धि आज पनि विश्वमा नजिर बनेका छन्, तर, यसका अधिकांश मेनस्ट्रिम र टिभी मिडियाको फोहोर नाली बनेका छन् । भारतीय नागरिकमा लोकतन्त्रको जोश निकै गजब छ, तर प्रत्येक राति उनीहरुको जोशलाई कुल्चन मिडिया आइपुग्छ । भारतमा बेलुका त घाम डुबेपछि हुन्छ, तर अँध्यारो न्युज च्यानलमा प्रशारित खबरबाट फैलन्छ ।
भारतीय जनताका बीच लोकतन्त्र मजाले बाँचेको छ । हरेक दिन सरकारका विरोधमा जुलुस र प्रदर्शन हुन्छन्, तर मिडियाले यी प्रदर्शनहरुलाई अनदेखा गर्न थालेको छ । त्यो अब समाचार बन्दैन । उसका लागि प्रदर्शन गर्नु भनेको फाल्तु काम हो । बिना डेमोन्स्ट्रेसन कुनै पनि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी रहँदैन । यस्ता प्रदर्शनमा सम्मिलित लाखौं मानिस अब आफैं भिडियो बनाउँछन् । फोनबाट बनाइने त्यो भिडियोमा उनीहरु आफैं रिपोर्टर बनेर घटनाको बेहोरा दिन थाल्छन्, त्यसपछि त्यो प्रदर्शनमा आउनेहरुको ह्वाट्सएप ग्रुपमा चालाइन्छ । सूचनाको माध्यमहरुले उनीहरुलाई पठाउने नागरिक हुनुको पाठमा नागरिक हुनुको अर्थ सरकारविरुद्ध नाराबजी गर्नु हुन सक्दैन । त्यसैले आम नागरिक आफू हुनुको अर्थ जोगाइराख्न ह्वाट्सएप गु्रपका लागि भिडियो बनाइरहेका छन् । आन्दोलन गर्नेहरु नै नागरिक पत्रकारिता गर्न थालेका छन् । आफ्नाे भिडियो बनाएर युट्युबमा हाल्न थालेका छन् ।
जब राज्य र मिडिया एक भएर नागरिकलाई नियन्त्रण गर्न थाल्छन् तब के कसैले नागरिक पत्रकारका रुपमा भूमिका खेल्न सक्छ त...? नागरिक बनिरहने अनि उसको अधिकार अभ्यास गरिरहनको लागि इको–सिस्टम पनि त्यही लोकतन्त्रले जुटाउनु पर्ने हुन्छ । तर, यदि अदालत, प्रहरी अनि मिडिया शत्रुतापूर्ण हुन्छन्, त्यसैगरी समाजको त्यो हिस्सा, जो राज्य बनिसकेको छ, तपाईंबाट तर्किन खोज्छ, त्यसबेला हरेक प्रकारले निहथ्था एक नागरिक हुन, हदसम्म लड्न सक्ला....? तर पनि नागरिक लडिरहेको छ ।
मलाई हरेक दिन ह्वाट्सएपमा ५ सयदेखि १ हजारसम्म म्यासेज आउँछन् । कहिलेकाहिँ त त्योभन्दा बढी । हरेक दोस्रो म्यासेजमा मानिसहरुले आफ्नाे समस्यासँगै पत्रकारिताको मतलब पनि लेखेका हुन्छन् । मेनस्ट्रिम मिडियाले पत्रकारिता बिर्सिए पनि जनतालाई याद छ, पत्रकारिताको परिभाषा कस्तो हुनुपर्छ । हरेकपल्ट जब म मेरो अफिसको ग्रुपमा केही म्यासेज आएको छ कि हेर्न ह्वाट्सएप खोल्छु, म त्यहाँसम्म पुग्नै पाउँदिन । म हजारौं मानिसको सूचना हेर्नमै अल्झिन्छु, त्यसैले म मेरो ह्वाट्सएपलाई पब्लिक न्युजरुम भन्छु ।
देशभरमा मेरो नम्बर ट्रोलमा भाइरल गरिएको छ ताकि मैले गाली सुन्नु परोस् । गाली पनि आउँछन्, धम्की पनि आउँछन् । तर, त्यसमा आम मानिस पनि आइरहेका छन्, आफ्नाे अनि आफ्नाे क्षेत्रका खबर लिएर । ती त्यस्ता खबर हुन्छन्, जुन न्युज च्यानलको परिभाषाबाट हराइसकेका छन्, तर तिनै च्यानल हेर्ने ती मानिसहरु जब आफैं उल्झनमा पर्छन्, त्यसबेला उनीहरुले पत्रकारिताको मतलब बुझ्छन् । उनीहरुको अन्तरमनबाट पत्रकारिताको अर्थ अझै मेटिइसकेको छैन ।
जब सत्तारुढ पार्टीले मेरो शो बहिस्कार गरेको थियो, मेरो सारा बाटो समाप्त भएको थियो । त्यसबेला तिनै मानिस थिए, जसले आफ्ना समस्याहरुले मेरो शो भरिदिए । जुन मेनस्ट्रिम मिडियाले नागरिक पत्रकारिताको नाममा पत्रकारिता र सत्ताकाविरुद्ध बोल्नेहरु समेत आउटसोर्स गरेका थिए, जसले आम जनतामा मिडियाको भ्रम रहिरहोस्, नागरिकको यो समूहले मलाई मेनस्ट्रिम मिडियामा नागरिक पत्रकार बनाइदियो । मिडियाको भविष्य यही हुनुपर्छ । उसका पत्रकारहरुलाई नागरिक पत्रकार बनाउनु पर्छ, ताकि आम मानिस नागरिक बन्न सकुन् ।
ठीक त्यसैबेला, जब न्युज च्यालहरुबाट आम सर्वसाधारण गायब गरिए, डिबेट शोका माध्यमहरुबाट उनीहरुमाथि राजनीतिक एजेण्डा थोपरिन थालियो, एक प्रकारको कथानकमा मानिसहरुलाई घेर्न थालियो, त्यही बेला आम मानिस त्यो घेरा तोड्ने प्रयास गरिरहेका थिए । गाली र धम्कीहरुका बीच त्यस्ता म्यासेजहरुको संख्या बढ्न थाल्यो, जसमा आम मानिस सरकारसँग माग गरिरहेका थिए । आम मानिसको समस्यामा मलाई नै ट्रोल गर्न थालियो । तपाईं बोल्नुहुन्न, तपाईं पनि सरकारसँग डराउनु भएको हो...? मैले सुन्न शुरु गरें ।
'Prime Time' को स्वरुप अलग्गै भयो । हजारौं मानिसहरुका म्यासेज आउन थाले कि केन्द्र सरकार र राज्य सरकारले सरकारी जागिरको परीक्षा २ देखि ३ वर्ष लगाएर पनि पूरा गरिरहेका छैनन् । जुन परीक्षाका नतिजा आउँछन्, त्यसमा पनि नियुक्ति पत्र जारी हुँदैन । यदि मैले सबै परीक्षामा सहभागी युवाहरुको संख्याको योगफल हिसाब गरेको भए, नतिजाको प्रतिक्षा गरिरहेका युवाहरुको संख्या एक करोडसम्म पुग्थ्यो ।
'Prime Time'को ‘जब सिरिज’को असर हुन थाल्यो र हेर्दाहेर्दै कतिपय परीक्षाको नतिजा निस्कन थाल्यो अनि नियुक्ति पनि दिन थालियो । जुन प्रदेशमा गए पनि त्यहाँ २०१४ को परीक्षाको नतिजा २०१८ सम्म पनि आएको थिएन । मेरो ह्वाट्सएप नम्बर पब्लिक न्युजरुम भइसकेको थियो । सरकार र पार्टी सिस्टमले जब मेरा सिक्रेट सोर्सहरु बन्द गरिदिए, आम सर्वसाधारण मेरा ओपन सोर्स बने ।
'Prime Time' अक्सर सर्वधारणले पठाएका म्यासेजका आधारमा बन्न थालेको छ । यो ह्वाट्सएपको रिभर्स उपयोग थियो । एकातर्फ राजनीतिक दलहरुको आईटी विभागबाट साम्प्रदायिकता र जेनोफोबिया फैलाउने म्यासेज गइरहेका थिए भने अर्कोतर्फ असली समाचारको म्यासेज मलाई आइरहेका थिए ।
मेरो न्युजरुम 'NDTV' को न्युजरुमबाट सरेर जनताबीच पुगेको छ । यही नै भारतको लोकतन्त्रको आशा हो, किनकी उनीहरुले नत सरकारसँग आशा गर्न छोडेका छन्, नत प्रश्न गर्ने माध्यम नै छोडेका छन् । त्यसैले त उनीहरु मेनस्ट्रिममा आफ्ना लागि आँखी भ्याल खोजिरहेका छन् । जब विश्वविद्यालयको वरियताका झुठा सपना देखाइँदै थिए, तर विद्यार्थीहरु आफ्ना कक्षा कोठा र शिक्षका संख्या मलाई पठाइरहेका थिए । १० हजार विद्यार्थीमा १०–२० शिक्षक भएका कलेजसम्म नत्र कसरी पुग्थें, यदि जनता मसँग हुन्थेनन् भने । जर्नालिजम ईज नेभर कम्पिलिटेड विदआउट सिटिजन एण्ड सिटिजनसिप । जुनबेला मिडिया राज्यको हिसाबबाट नागरिक हुनुलाई परिभाषित गर्दै थिए, त्यसैबेला नागरिक आफ्नाे हिसाबले मलाई परिभाषित गर्न थालेका थिए । लोकतन्त्रमा आशाको सिउँडी फूल फुल्न थालेको थियो ।
मलाई चन्डीगढकी ती युवतीको म्यासेज अझै याद छ । ऊ 'Prime Time' हेरिरहेकी रहिछ, उसका बुवाले टिभी बन्द गरिदिएछन् । उसले आफ्नाे बुवाको कुरा मानिन बरु 'Prime Time' हेरिन । ऊ भारतको लोकतन्त्रको नागरिक हो । जबसम्म त्यो युवती रहन्छे, लोकतन्त्रले आफ्नाे चुनौतीहरुलाई पार गर्नेछ । म ती धेरै मानिसहरुको बारेमा भन्छु, जसले पहिले ट्रोल बनाए, गाली गरे, तर पछि आफैं लेखेर मसँग माफी मागे । यदि मलाई लाखौं गाली आएका छन् भने, यस्ता म्यासेज पनि हजारौं आएका छन् । मलाई महाराष्ट्रको त्यो युवकको म्यासेज याद आउँछ, जो आफ्नाे पसलमा टिभीमा चल्ने वादविवादबाट डराउँछ अनि एक्लै कतै पर गएर बस्छ । जब घरमा उ मेरा शो चलाउँछ, उसको बुवा र दाई मलाई देशद्रोही भन्दै शो बन्द गरिदिन्छन् ।
मेनस्ट्रिम मिडिया र आईटी विभागले मेराविरुद्ध यस्तै अभियान चलाएका छन् । तपाईं बुझन सक्नुहुन्छ कस्तो किसिमको अभियानको घेरामा शत्रुता हुन थालेको छ ।
यो म यसकारण भन्दै छु कि आज नागरिक पत्रकार बन्न तपाईंलाई राज्य र राज्य जस्तै व्यवहार गर्ने नागरिकसँग पनि जुझ्नुपर्ने हुन्छ । चुनौती राज्य मात्र होइन, राज्यजस्ता भईसकेका मानिसहरु पनि हुन् । साम्प्रदायिकता र उग्रराष्ट्रवादले भरिएको भीडको बीचमा अरु नागरिक पनि डराउँछन् । उनीहरुको जोखिम बढेको हुन्छ । तपाईंलाई आफ्नाे मोबाइलमा यस्तो म्यासेज हेर्दै घरबाट निस्कनु पर्ने हुन्छ कि म्यासेज पठाउनेले तपाईंलाई लिन्च गरिदिन्छ । आजको नागरिक दोहोरो दबाबमा छ । उसको सामुन्ने यस्तो मिडियासँग लड्ने चुनौती छ जो दिनरात उसैको नाममा धन्दा गरिरहेको छ ।
हामी यस्तो मोडमा छौं जहाँ सरकारसम्म पुग्नका लागि मिडियाको अवरोध छिचोल्न पनि युद्ध गर्नुपर्छ ।
नत्र उसको आवाज ह्वाट्सएपबाट इनबक्समा आइरहन्छ । पहिले आम मानिसलाई नागरिक बनाउनुपर्छ, त्यसपछि राज्यलाई हामी नागरिक हुनका लागि निडर हुने माहोल बनाउनु उसको दायित्व हो भनेर बताउनुपर्छ । राज्यलाई प्रश्न गर्नसक्ने माहोल बनाउने जिम्मेवारी पनि राज्यकै हो । कुनै पनि सरकारको मूल्याङ्कन तपाईं तब मात्र गर्न सक्नु हुन्छ जब उसको सरकारमा मिडिया स्वतन्त्र होस् । सूचनापछि अब अर्को आक्रमण इतिहासमा भइरहेको छ, जसले हामीलाई शक्ति दिन्छ, प्रेरणा दिन्छ । त्यही इतिहासलाई खोसिँदै छ ।
स्वतन्त्रताको समयमा पनि यस्तै थियो । बाल गंगाधर तिलक, माहात्मा गान्धी, डा. अम्बेडकर, गणेश शंकर विद्यार्थी, पीर मुहम्मद मुनिस–नाम अनगिन्ती छन् । यी सबै नागरिक पत्रकार थिए । सन् १९१७ मा चम्पारन सत्याग्रहका बेला केहीदिन माहात्मा गान्धीले पत्रकारहरुलाई आउन रोक लगाए । उनले तपाईंहरु चम्पारन सत्याग्रहबाट टाढै रहनुहोस् भनेर पत्र नै लेखे । गान्धी आफैं किसानहरुबाट उनीहरुका कुरा सुन्न थाले । चम्पारन, गान्धीको वरिपरि पब्लिक न्युजरुम बनाएर बस्यो । उनीहरु आफ्नाे गुनासो प्रमाणका साथ उनको अघि राख्न थाले । त्यसपछिको भारतको स्वतन्त्रताको इतिहास तपाईंहरु सबैलाई थाहा नै छ ।
मलाई यस्तो कुनै पनि समय अनि मुलुक थाहा छैन जो खबरबिना नै चल्न सकोस् । कुनै पनि देशलाई चलायमान हुन सूचनाको प्रमाणिकता जरूरी हुन्छ । सूचना सही र प्रमाणिक भएन भने नागरिकहरुबीचको भरोसा कम हुन्छ । त्यसैले एकपटक फेरि नागरिक पत्रकारिताको आवश्यकता तीव्र महशुस भएको छ । त्यस्तो नागरिक पत्रकारिता जो मेनस्ट्रिमको कारोबारी पत्रकारिताबाट अलग होस् । यो हतास अवस्थामा जोकोहीले यो खाली ठाउँ भरिरहेका छन् । कमेडीदेखि युट्युब शो गरेर नागरिक पत्रकारिताको मर्म जीवित राखेका छन् । उनीहरुको शक्तिको असरले भारतमा लोकतन्त्रको असर अहिलेसम्म एकतर्फी भइसकेको छैन । जनताको सूचनाको क्षेत्रमा आफ्नाे भूमिकाको लडाईं लड्दैछन्, अहिल्यै जित्न नसकेको भए पनि ।
महात्मा गान्धीले १२ अप्रिल, १९४७ को प्रार्थना सभामा पत्रपत्रिकाको बारेमा एउटा धारणा राखेका थिए । आजको विभाजनमुखी मिडियाका लागि उनको प्रवचन काम लाग्न सक्छ । गान्धीले एउटा ठूलै पत्रिकाका बारेमा भनेका थिए, जसले कांग्रेस कमिटीमा अब गान्धीले भनेको कसैले सुन्दैन भनेर लेखेको थियो । गान्धीले भनेका थिए यदि पत्रिका स्वस्थ रहँदैनन भने, हिन्दुस्तानको स्वतन्त्रता के कामको लागि ? आज पत्रिका डराएका छन् । उनीहरुले आफ्नाे आलोचनालाई देशको आलोचना बनाइदिन्छन् । जबकी, म मेनस्ट्रिम मिडिया र खासगरी न्युज च्यानलको आलोचना हाम्रै महान देशको हितका लागि गरिरहेको छु । गान्धीले भनेका थिए– तपाईं यो निकम्मा पत्रिका फालिदिनुहोस्, केही खबर थाहा पाउनु छ भने एक आपसमा सोध्नुहोस् । यदि पढ्नै मन लाग्छ भने सोची–सम्झी अखबार चुन्नुहोस् जो हिन्दुस्तानबासीको सेवाका लागि चलाइएका हुन् । जो हिन्दु र मुसलमानलाई मिलेर बस्न सिकाउँछन् । भारतका च्यानलहरुमा हिन्दु मुसलामानलाई लडाउने भिडाउने पत्रकारिता भइरहेको छ । गान्धी हुन्थे भने, १२ अप्रिल, १९४७ मा भनेको त्यही कुरा भन्थे होलान्, जो आज म दोहोर्याउँदै छु ।
आज वृहत रुपमा नागरिक पत्रकारिताको आवश्यकता छ, तर त्यसभन्दा बढी आवश्यकता लाकतान्त्रिक नागरिकको छ ।
म NDTV का करोडौं दर्शकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । NDTV का सबै सहयोगी याद आइरहेका छन् । डा. प्रणय राय अनि राधिका रायले कतिसम्म सहेका छन् । म हिन्दीको पत्रकार हुँ, तर मराठी, गुजरातीदेखि लिएर मलयालम र बंगालीभाषी दर्शकले पनि मलाई खुबै माया दिएका छन् । म सबैको हुँ । मलाई भारतका नागरिकले बनाएका हुन् । मेरा इतिहासका उत्कृष्ट शिक्षकहरु सधैं याद आइरहन्छन् । मेरा आदर्श महानतम अनुपम मिश्रलाई याद गर्न चाहन्छु जो चन्डीप्रसाद भट्टजीसँग मनिला आएका थिए । अनुपमजीको धेरै याद आउँछ । मेरो साथी अनुराग यहीँ छ । मेरा छोरीहरु र मेरी जीवनसंगिनी पनि । म नयनाको पछिपछि लागेर यहाँ आएको हुँ । सक्षम महिलाहरुको पछि लाग्नुस् । असल नागरिक बन्नु हुने छ ।
(NDTV इन्डियाका प्रवन्ध सम्पादक रवीश कुमारले म्यागसेसे पुरस्कार ग्रहण पूर्व फिलिपिन्सकाे मनिलामा गरेकाे सार्वजनिक सम्बाेधनकाे अरुणदेव जोशीले गरेको शब्दानुवाद)
प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ २२, २०७६, ०५:२४:००
इन्डोनेसियामा बाढीपहिरोबाट १० हजार विस्थापित
मैले हारेको होइन, मोदीले जितेका हुन्